Iindawo eziphezulu ze-backlink zingasinceda njani ukuba umxholo wakho ubonakale kubathengi bakho abanakho?
Ukuqhagamshelana nesakhiwo yithuba eligqibeleleyo lomgangatho wokuqukethwe. Ukwakha iinqununu ezinobungakanani obuphambili kubalulekile xa kufikelelwe ekuphuculweni kwewebhu. Isiqhagamshelo sokwakha isiqhelo, kwaye, kwaye siya kuba sisiseko se-Google. Yingakho i-athikili yethu iya kunikelwa kwiindlela ezifanelekileyo zokufumana i-backlinks ephezulu.
Uqhagamshelwano isakhiwo apho ubeka khona ikhonkco kwezinye imithombo yewebhu ekhokelela ekukholeni kwakho. Kwizakhiwo zesekhonkco, unokudala izixhumanisi ezingenayo kwiziko lakho elibhekiselele kwimimandla yangaphandle eyahlukeneyo. Ngokudala ezininzi ze-backlink zolu hlobo, uya kuba nokwakha inethiwekhi. Ukuba inani elikhulu leekhonkco zangaphandle ezibonisa indawo yakho zivela kwizikhundla eziphezulu ezihloniphekileyo, indawo yakho iya kuphakama kwixabiso kwaye iphakamileyo ephezulu kwiziphumo zophando.
Kukho iindlela ezininzi ezahlukahlukeneyo zokufumana unxibelelwano olunzulu. Zininzi zale ndlela zithintela kwaye zingenza indawo yakho ivinjelwe. Yingakho kufuneka ugxininise ingqalelo kwiinkalo ze-SEO ezimhlophe zokuqhuba isakhiwo sekhonkco.
Indlela yokubeka umxholo kwiGoogle?
Umzuzu obalaseleyo omele uhlangabezane nawo ukwandisa igunya lakho lezaziso kunye nokwazisa ngempawu. Akunzima kakhulu njengoko unokucinga. Udinga ukudala amanqaku amade abandakanya izihloko ezichaphazelekayo kubaphulaphuli bakho. Ngokomzekelo, umgangatho osisiseko-uphando, iziqulatho eziqulathe umxholo eziphendula imibuzo yakho yabathengi ngokufanelekileyo.
Ngaphezu koko, kufuneka wenze ukwakha okuphezulu, okuxhomekeke kwi-backlinks ezifanelekileyo kulo mxholo. Izixhumanisi ezitholakalayo ngokwasemzimbeni zibalulekile ukuveliswa kwezithuthi. Kukunzima ukubeka umxholo ngaphandle kwezonxibelelwano ezibhekiselele kuyo.
Indlela yokufumana i-backlink ephezulu?
I-backlinks yakho imele ihlelwe ngokuchanekileyo njengokwenziwa komgangatho ongaphezulu kwimeko yakho.
Iphutha le-webmasters eliqhelekileyo lenza kwisakhiwo soqhagamshelwano lugqithisa ngokugqithiseleyo umyalezo we-anchor. Kufuneka uzame ukusebenzisa amagama angundoqo a-anchore ukubonisa iinjongo zokukhangela ukuhluka kohlobo lwakho. Ngaphezu koko, kufuneka uphephe umdlalo ochanekileyo okanye ii-anchors zorhwebo.
Olunye uhlobo lwe-backlinks olufunekayo ukubeka ingqwalasela ngokukodwa kwi-link content. Bavela kwiiblogs ezinxulumene ne-niche kunye nezithuba zabamenywa. Kubalulekile ukusebenzisa umxube wemvelo, ojoliswe kuyo, kunye nokuncintisana kwemigangatho yokukhangela kunye nohlobo lomsila omde xa udala iziqulatho ezinomxholo.
Ukuphucula umgangatho wenkcazelo ingaba yinkqubo echitha ixesha. Nangona kunjalo, emva kokuba wakha isiseko esingundoqo, unokuqala ukudala umgangatho, i-backlink ephezulu eneempembelelo ezinee-anchors ezifanayo. Njengoko ndikhankanyiwe ngaphambili, kufuneka uphephe ukuphinda uphinde usebenzise iitriki zokukhangela njengebhokisi lokukhangela unokuyityelela njengogaxekile.
Kukho amanyathelo amaninzi ofuna ukuwalandela ukudala inethwekhi ye-backlinks ephezulu. Ezi nyathelo ziquka ukucela i-backlinks; ukwakha ubudlelwane obuhle kunye neeblogi ezinxulumene niche kunye ne-webmasters; izithuba zobungqina kunye neengaphandle zangaphandle; yenza iblogi yakho kwaye yenze idume; wabelane ngokuqhagamshelana nawe kwiindawo zokuzonwabisa ezithandwa ngabantu Source .